`नाईं नभन्नु ल ४` लाई शुभकामना जीवनले दिए - Glamorous Icon
२५ चैत्र २०७२, बिहीबार ०८:४८
Home›GIcon News›`नाईं नभन्नु ल ४` लाई शुभकामना जीवनले दिए
बिकास आचार्य र अभिनेता जीवन लुईटेलको सम्बन्ध कुनै बेला नङ र मासु जस्तै आत्मिय थियो । निर्देशक आचार्यको निर्देशकिय डेब्यू फिल्म ‘नसिब आफ्नो’बाट नायकको पगरी गुथेका जीवनको फिल्मी करियरले त्यो बेला उचाई लियो जुन बेला ‘नाईं नभन्नु ल’ बन्यो ।
बिकास आचार्यले निर्माण तथा निर्देशन गरेको ‘नाईं नभन्नु ल’मा जीवनले निर्वाह गरेको शिशिरको भूमिका अहिले पनि दर्शकले बिर्सेंका छैनन् । तर, आज चौथो सिरिजमा आईपुग्दा बिकास र जीवनको सम्बन्ध धिमिलिएको छ । ‘नाईं नभन्नु ल २’मा छोटो भूमिकामा देखिएका जीवन त्यसपश्चातका सिरिजमा अटेनन् ।के कारणले सम्बन्धमा तुराषपात आयो, कसैले बुझेको छैन । तर पनि जीवनले आफ्नो गुरू जस्तै मानेका आचार्यको फिल्मलाई शुभकामना भने दिन बिर्सेंका छैनन् । उनले यहि शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘नाईं नभन्नु ल ४’लाई सफलताको शुभकामना आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत दिएका छन् ।
जीवनले ‘नाईं नभन्नु ल ४’सँगै रिलिज हुन लागेको फिल्म ‘राम प्यारी’लाई पनि सफलताको शुभकामना दिएका छन् । रेखा र जीवन नजिकका साथी मात्र नभएर फिल्मका हिट जोडी पनि हुन् । जीवनले आफ्नो करियरको डेब्यू भनिएको फिल्म ‘नसिब आफ्नो’मा रेखासँगै काम गरेका थिए । त्यसपश्चात ‘अन्दाज’ उनीहरूले अभिनय गरेको सुपरहिट फिल्म हो ।यता निर्देशक बिकास आचार्यले पनि जीवनसँग भोलीका दिनमा काम गर्न सक्ने संकेत केही दिन अगाडी राजधानीमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा दिईसकेका छन् । के ‘नाईं नभन्नु ल ५’मा जीवनलाई देख्न सकिएला त ? बिकासको क्याम्पका नायक भनेर चिनिएका जीवन फेरी सोही क्याम्पमा फर्केलान् त ? हामी यो सुखद खबर सम्प्रेशण गर्ने आशमा हुनेछौं ।
अब दीपिका सलमानसँग
‘प्रेमगीत २’ निर्माण घोषणा सँगै ‘प्रेमगीत’ले साट्यो ...
बर्षको पहिलो ४ महिनाः दयनिय अवस्थामा फिल्मको व्यापार
आजबाट छक्कापञ्जा दुई